KUSIMBISA: Martin Vrijland
Akaiswa mukati THE SIMULATION, Kuparadza Kupandukira, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we26 September 2019	• 10 Comments
Papa Francis, Jesuit Musande Nicholas asina ndebvu-pane ndebvu, mutevedzeri waJesu Kristu pasi pano, akafonera 2 vatungamiriri vese vepasvondo rapfuura kuti vauye kuVictoria pa14 muna Chivabvu 2020 ye 'Global Pact' (chibvumirano chenyika). Pane zvinhu zviviri zvakakosha pahurongwa hwemusangano uyu apo munhu wese anofanira kuuya. Yokutanga ndeye […]
David Sinclair mapurofesa kudhipatimendi re genetics, Blavatnik Institute uye pamwe-director wePaul F. Glenn Center yeBiological Mechanisms yeUkweguru kuHarvard Medical School. Mune mharidzo iri pasi apa, anotsanangura kuti kukwegura kwemuviri wemunhu kune chekuita nekurasikirwa neruzivo; zvakafanana ne […]
Akaiswa mukati THE SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 30 July 2019	• 14 Comments
Kana tikarava ese masaini ezvavari, saka toona kuti nyika iri kukurumidza kushanduka uye kuti 2.0 yevanhu ichokwadi mukati mazvino uye 10 makore. Tichazoona pasi nepasi 2.0 (nedzimwe shanduro dzakawanda) dzakatenderedza 2045. Nekudaro chiratidzo chemuraraungu kwese kwaunoda [...]
Kubva kuRutger Hauer Chibereko cheTurkey kuenda kuGay Pride uye iyo Milkshake festival
Akaiswa mukati THE SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 29 July 2019	• 5 Comments
Ini ndakabvunzwa zuro kana ndakanga ndaona mafirimu aRutger Hauer. Sekureva kwemunyori, idzo dzaive mafirimu anotyisa. Chibereko cheTurkey nekuti chakatyora bonde nemufirimu izvo zvimwe zvakange zvakanaka. Handisati ndamboona ese mafirimu, nekuti ini ndine mhando yekusanzwisisika yekudzvinyirira kune hypes, asi zvakadaro ndinoziva […]
Yenguva yekubuda kunze kwenyika yeroto uye kutanga kutarisa nyika yakakupoteredza kune zvakakosha. Izvo zvichaunza kuchinja kukuru muupenyu hwako. Saka ndinoda kuratidzira mharidzo inotevera naRichard Thieme (pasi pacho penyaya ino), aimbova mupirisiti akazvishandura kuva [...]
Akaiswa mukati THE SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 20 July 2019	• 12 Comments
Vhiki ino hurukuro duku yakasimuka pano panzvimbo ino nezvekuzvarwa patsva uye mubvunzo wekuti izvi zviripo here. Maererano nekukurukurirana, paizova nemashoko ekupupurira akakwana angazojekesa kuti kuberekwa patsva kunovapo. Pfungwa dzangu ndeyokuti kukurukurirana kunowedzera kushamisika kana iwe wapinda muchinangwa chechokwadi chedu [...]
Akaiswa mukati THE SIMULATION	by Martin Vrijland	pana 15 July 2019	• 32 Comments
Iye zvino zvatakazosvika pamhedziso yokuti vazhinji vakatipoteredza variko vasina upenyu (ona chinyorwa ichi), ndinokukumbira kuti ufungezve nezvemashoko aya. Handisi kureva 'nenzira yekutaura' kana 'muzvirevo', kwete ini ndinoreva kuti haisi mhuka. "Enda uwedzere" iri chirevo chinozivikanwa [...]
Akaiswa mukati THE SIMULATION	by Martin Vrijland	pana 11 July 2019	• 13 Comments
Vaya vakaverenga nyaya pamusoro pevanhu vane simba (NPCs) vangave vanonzwisisa kuti izwi rokuti "kuziva" kana kuti "mweya" rinogona kufananidzwa nehutano husina tsvina pakati pehutano hwehupi ne avatar mukuenzanisa. Nhamba yemufananidzo mukufananidza, sezvakange yakaita, yakarongedzwa kunze uye naizvozvo yakafuridzirwa. Muchikamu ichocho [...]
Akaiswa mukati THE SIMULATION	by Martin Vrijland	pana 8 July 2019	• 17 Comments
Zvinenge zvisingabviri kufungidzira, asi unomboshamisika kana vamwe vanhu vakakupoteredza vane mweya 'here'? Iwe unongotarisa kutarisana newe mukati mehupenyu hwezuva nezuva uye iwe dzimwe nguva unowana vanhu vanogona kwazvo kugamuchira tsitsi, asi chaizvoizvo zvachose [...]
Total Visits: 1.462.831